Nanatanteraka fanadihadiana lalina ny zandary ka tsy nivoana tamin’ny asa fitsikilovana sy ny angom-baovao fa eny Anosibe sy Soavimbahoaka Ampitatafika no atidohan’ireo fitaovam-piadiana mampidi-doza ireo. Nametraka ny zotra araka ny lalàna sy ny paik’ady rehetra isorohana ny mety ho fifampitifirana ny zandary ary nanao be midina tampoka tamin’ny tranon’ireo raim-pianakaviana ireo, taorian’ny fety. Sarona tamin’ny fisavana ny tranon’izy ireo ny basy poleta aotômatika roa izay vita gasy. Tratra nandritra izany koa ny fonom-bala miiisa roa sy bala sivy. Araka ny seraseran’ny zandarimariam-pirenena hatrany, miandrandra ny fampitam-baovao avy amin’ny tsara sitrapo hatrany ireo mpitandro filaminana hisorohana ny tsy fandriampahalemana aterak’izao trafika ana basy izao. Voatanan’ny mpitandro filaminana hatrany moa ny tsiambaratelon’ireo mpanome vaovao. Miandrandra ny fitsarana koa izy ireo mba tsy hanao akambo ny fanetriben’ny firenena sy ny namany toy izao. Niakatra fampanoavana ny fara’ny herinandro teo ny raharaha ary any am-ponja izy ireo no miandry ny fitsarana azy.